गृहमन्त्री निल्सनले किन गरिन एकाएक राजीनामा ?::News from Nepal
गृहमन्त्री निल्सनले किन गरिन एकाएक राजीनामा ?
सोमवार, चैत्र २५, २०७५
वासिङ्टन । अमेरिकी गृहमन्त्री (होमल्यान्ड सेक्युरिटी) कस्र्टजेन निल्सनले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यअमेरिकी राष्ट्रहरुबाट मेक्सिकोको सीमा हुँदै आप्रवासीको अमेरिका प्रवेशलाई रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरेसँगै निल्सनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि ट्वीट गर्दै निल्सनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको बताएका छन् । उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा आयुक्त केभिन म्याकअलीनानलाई दिएका छन् ।
म्याकअलीनान लामो समयदेखि अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत छन् । उनी अमेरिकी कङ्ग्रेस एवं प्रशासनभित्र निकै सम्मानित व्यक्तित्व पनि छन् ।
“जिम्मेवारीबाट बाहिरिने अहिले सबैभन्दा उत्तम समय हो भन्ने मैले ठानेकी छु,” निल्सनले लेख्नुभएको अवकाशपत्रमा उल्लेख छ । “अब नियुक्त हुने मन्त्रीलाई कङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन रहने र आप्रवासीका सम्बन्धमा देखिएका कानुनी जटिलताहरु फुक्दै जाने मैले विश्वास लिएकी छु ।”
अमेरिकी कानुनी व्यवस्थामा रहेका जटिलताका कारण आप्रवासीहरु सहजै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेको पूर्वमन्त्री निल्सनको धारणा छ ।
यही तथ्यलाई मनन गरी ट्रम्प प्रशासनले गृह विभागमा व्यापक फेरबदल गर्न चाहेको छ । राजीनामा गर्नुअघि निल्सनले गत शुक्रबार ट्रम्पसँगै अमेरिकी–मेक्सिको सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ अमेरिकी सीमा अधिकारीहरु र स्थानीय कानुन कार्यान्वयन एजेन्सीका अधिकारीहरुसँग गोलमेच बैठक समेत गरेका थिए । ती बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले चर्को आलोचना गर्न थालेपछि निल्सन बैठक कक्षबाहिर समेत निस्केका थिए ।
सीमा क्षेत्रको भ्रमणपछि निल्सन वासिङ्टन फर्कनुभएको थियो भने राष्ट्रपति ट्रम्प क्यालिफोर्निया र नेभादातर्फ चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न प्रस्थान गरेका थिए । निल्सनका नजिकका व्यक्तिहरुका अनुसार निल्सनले अरु विभागबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको तथा कठिन आप्रवासन मामिलामा ट्रम्पका सहयोगी एवं सल्लाहकारबाट अनावश्यक दबाब दिएको अनुभव गरेका थिए । आइतबार उहाँ ह्वाइटहाउस पुगेर राजीनामा बुझाउनुभएको थियो, तर जानकारहरुका अनुसार यो राजीनामा स्वेच्छिक थियो ।
ट्रम्प प्रशासनमा टिक्न नसकेर राजीनामा गर्ने निल्सन पछिल्लो व्यक्ति हुन् । यो राजीनामासँगै ह्वाइट हाउसका महत्वपूर्ण पदहरु रिक्त भएका छन् । रक्षामन्त्री जीम म्याटिसले राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक रक्षामन्त्रीको रुपमा प्याट्रिक शाहनानले जिम्मेवारी पाएका छन् । जोन केलीले गत वर्ष राजीनामा गरेपछि रिक्त भएको ह्वाइट हाउसको महत्वपूर्ण चिफ अफ स्टाफको पदमा माइक मल्भेनीले कार्यवाहक भएर काम गरिरहेका छन् । -विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा
हरिविजोग भएपछि मोदीलाई चोर भन्दै क्वाँ क्वाँ रोए यी व्यक्ती (भिडियो सहित)
भारतमा काग्रेस पत्तासाफ मोदीको एकलौटी राज
क्यामारा बोकेर धमला दिल्लीनै पुगे पछि ..
राहुलको राजिनामा लुकाउँन सोनियाँको चलखेल
पराजय स्विकार्दै गान्धिले दिए राजिनामा, भारतमा तरंग
चुनाव हारे पछि पहिलो पटक बोले गान्धि, मोदीलाई के भने ?
को बन्छ करोडपती नामक कार्यक्रममा विराटनगरका राजीव जैनले पहिलो पटक एक...
दोस्रो कार्यकालको सुरुमै नेपाललाई मोदीको सप्राइज !
भारतमा लोकासभा निर्वाचनको मतपरिणाम आइरहेको बेला विभिन्न चर्चा परिचर्चाले बजार तातेको...
सरकारलाई बदनाम गराउँन काउन्सिल अध्यक्षनै लागे पछि ..
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ प्रधान सम्पादक रहेको ‘जनआस्था’...
प्रचण्डलाई धोका दिएर बादल ओलीतिर लस्किए पछि..
नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड) र गृह मन्त्री...
दिल्लीमा धमला पोज, यसरी दिए फुल डोज
भारतीय लोकसभा निवार्चको मतगणना र परिणामले विश्वको ध्यान खिचिरहको छ ।...
भारतको लोकसभा निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा निकै रमाइला किस्साहरु पनि बाहिर आइरहेका...
निजी विधालयलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह सक्नुहुन्छ भने सामुदायिक पनि चलाउँनुस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी शिक्षालय बन्द गराउँने पक्षमा नरहेको...
भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा प्रभावशाली सुधारसहित पुनः विजयी...
भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहँदा त्यसले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ ।...
भारतीय काग्रेसआइले लोकसभा निर्वाचनमा लज्जासपद पराजय बेहोरे प िसो पार्टीका अध्यक्ष...